Mba hanomezana fahafaha-mivelatra, hamaly, ny kalitao tsara ary ny takiana amin'ny fotoana ilana azy, dia manohy mampiasa vola amin'ireo milina, fizotrany ary zava-dehibe indrindra ho an'ny olona izahay. Miaraka amin'ny tsipika SMT haingam-pandeha miisa efatra feno ho an'ny famokarana lehibe. Ny tsipika tsirairay dia misy mpanonta mandeha ho azy Desen sy lafaoro misy faritra 8, mifandray amin'ny mpampita sy mandeha / mampidina entana mandeha ho azy ary rafitra AOI milahatra. Ny masininay dia afaka mitantana singa avy amin'ny fanoherana 0201 mankany amin'ny kianja filalaovana baolina (BGA), QFN, POP ary fitaovana avo lenta hatramin'ny 70mm2.
Ny fanontana vita amin'ny solder dia dingana iray manakiana, izay ahitan'ny mpanonta Desen mandeha ho azy araka ny tokony ho izy sy tsy miova, miaraka amin'ny fizahana optika mandeha ho azy ho fanamarinana. Ny solika apetaka apetaka dia zahana tsara amin'ny lafaoro 8-zone.
SMT anay Ny fizotrany dia tohanan'ireo injeniera voaofana efa za-draharaha IPC, amin'ny fampiasana ireo fitaovana teknolojia farany farany hametrahana sy hanamarinana ny fizotrany. Ny fivorian'ny SMT rehetra dia asiana AOI amin'ny alàlan'ny rafitra AOI andalana. X-ray dia azo jerena amin'ny fitsirihana ny pitch sy BGA.
Ny fifehezana ny fitaovana dia misy lafaoro fanaova ary fanangonana maina ho an'ny fikojakojana marina. Fa fanovana sy fanavaozana, misy ny tobim-panamboarana pitch / BGA tena tsara feno roa.